Dhata-Dzinotungamirwa Matanho Gadzira Jedi-Chikamu Chikamu Ads | Martech Zone
Chishanu, April 17, 2020 Chishanu, April 17, 2020 Michael Ray
Star Wars inotsanangura iyo simba sechimwe chinhu chinoyerera kuburikidza nezvinhu zvese. Darth Vader anotiudza kuti tisazvidze uye Obi-Wan anoudza Ruka kuti inosunga zvinhu zvese pamwechete.
Tichitarisa pasocial media kushambadzira zvakasikwa, ndizvo dhata iyo inosunga zvinhu zvese pamwechete, inokonzeresa kugadzira, vateereri, mameseji, nguva uye nezvimwe. Hezvino zvidzidzo zvishoma zvekukubatsira iwe kudzidza kuti ungashandisa sei iro simba kuti uvake rakasimba, rine simba mushandirapamwe.
Chidzidzo 1: Tarisa pane Zvakajeka Zvinangwa
Pfungwa dzako dzinogadza chokwadi chako.
Tarisa ndicho chinhu chakasarudzika chakakosha pane chero mushandirapamwe wakabudirira uye kushomeka kwekutarisa ndicho chikonzero chikuru chekutadza Zvakajeka, kuyerwa zvinangwa zvine basa uye ivo chido sarudza chokwadi chako.
Paunenge uchinge wasarudza danidziro yemushandirapamwe, shandisa mapoinzi edhata pawebhusaiti yako nemikana yemagariro kuti uone kana zvichigona
Tarisa pane chinangwa chako: Gamuchira chiuru chemazana emakero eemail.
Wongorora webhusaiti data: Kubva pane data rapfuura, tinoona zvinotora vanhu makumi maviri nevashanu vanoshanyira fomu iri kuti vawane email imwe chete.
Sarudza zvibodzwa zvewebhu traffic: Kana makumi maviri neshanu vanhu = 25 kero yeemail, zvinotora makumi maviri neshanu kurovera kune iro peji rewebhu kuwana chiuru kero dzeemail.
Mhanya zviitiko zveveruzhinji: Mazhinji mapuratifomu ekushambadzira eruzhinji ane chishandiso chekuratidzira chinoratidza kufungidzira, kudzvanya kana kutendeuka. Pinza bhajeti yako mumidziyo iyi kuti uone kana kusvika makumi maviri neshanu webhusaiti kurova kunokwanisika.
Ongorora uye calibrate: Kana zvikwangwani zvako zvine bhajeti yako, zvakanaka! Kana iri nzira iri pasi, gadza zvinangwa chaizvo kana kuwedzera bhajeti rako remushandirapamwe.
Chidzidzo 2: Sarudza Nzira Yako Nenjere
Iko kutya kwekurasikirwa ndiyo nzira inoenda kudivi rerima.
Vatengesi vakawandisa vanoita sarudzo dzinoenderana nepfungwa yekuti kana vakasashambadzira kushambadza kwavo kune vateereri vakawanda sezvinobvira, vachakundikana kumakwikwi. Muchokwadi, kutsvaga iyo rudyi vateereri vakaita sekuwana tsono mune galactic haystack uye data ichakubatsira iwe kuti usvike kwavari zvakanyanya uye zvine mutengo-mushe.
Zvino iwe unowanzo kuve neruzivo rwevateereri vaunoda kushambadza kwavari, asi iwe unofanirwa kuona yakanakisa nguva nenzvimbo yekuvasvikira. Heano maitiro ekutendera data kusarudza:
Tamba kunetiweki simba: Yese pasocial network ine masimba akasarudzika ayo anotendera iwe kuti usvike kune vateereri nenzira dzakasiyana. LinkedIn, semuenzaniso, yakanakira kunongedza zita rebasa, saka kana vateereri vako vari injini, iwe unogona nyore kuvaka vateereri veLinkedIn kuti usvike kwavari. Nekudaro, kana mushandirapamwe wako wakanangana nehunyanzvi hweinjiniya (iti mwenje kumhanya kufamba), ungangoda kuwedzera nemashambadziro epaTwitter ayo anotendera iwe kunongedza zvichibva pakutaurirana kwevanhu kwavanenge vakatenderedza tekinoroji iyi nekuti vatove nechekuita nenyaya iyi. .
Mukushambadzira munharaunda, saizi anoita nyaya: In Humambo Hunorova Kudzoka, Yoda ane mukurumbira anoudza Ruka kuti "saizi haina basa”Asi mukushambadzira, saizi ndizvo zvese. Kazhinji kutaura, madziva makuru evateereri anotendera netiweki yekushambadzira kutanha kuburikidza neayo data algorithm zvakanyanya kubatsira kubatsira kuziva vanhu vangangopindura kushambadziro yako. Vateereri vadiki vanopa mashoma data kune iwo maalgorithms, asi iwo anodhura zvakanyanya uye anogona kukubatsira iwe kuita zvinhu sekambani imwe neimwe kana indasitiri kunongedza. Mushandirapamwe wega wega wakasiyana, saka hupamhi kana hushoma mambure auri kukanda achasiyana.
Ita kuti vateereri vakwikwidze: Iwe une akawanda masocial targeting sarudzo anosanganisira aripo mutengi zvinyorwa, vanobatanidzwa vateereri uye huwandu hwevanhu / zvido. Iye zvino pane kuvimba nechikepe chimwe chete kuti umhanye blockade, mhanyisa zvishoma, vateereri vakatarisana uye iwe unogona kuona kuti ndeipi inoshanda uye wozoshandura mafambiro gare gare zvichienderana nekuita.
Chidzidzo 3: Vimba neData, Kwete Rombo
Mune ruzivo rwangu, hapana chinhu chakadai rombo rakanaka.
IJedi inoonekwa rombo nekuda kwekudzidziswa kwavo kwakasimba uye kuzvipira pakudzidza maitiro ekuziva danho rekutora uye maitiro avo kune iyo simba inotungamira nzira yavo. Kune mushambadziro wezvemagariro, data rinoita basa rakafanana kuburikidza nhanho dzese dzerwendo rwedu rwekushambadzira, zvichitigonesa kuita sarudzo dzakadzidziswa pachokwadi, pane mhanza.
Iye zvino chikamu chakakura chekuratidzira chiri kuona kuti ndezvipi zvinoonekwa uye mameseji ekugadzira zvinhu zvichashandiswa kuzvisimudzira. Kazhinji, izvi zvinotungamira mukusawirirana kwevashandi, asi data rinozvigadzirisa. Heano maitiro:
Gadzira yekutanga mutsara: Zvese zvinhu zvekusika zvinofanirwa kutevedzera zviyero zvemhando, zvive zvine chekuita nezviri kukurudzirwa uye zvakagadzirirwa kune vateereri. Ongorora zvakashanda kare kuti uwane izvo zvichazoshanda mune ramangwana.
Edza zvese: Kazhinji, mabhureki anoedza kudzikisa mushandirapamwe wavo pasi pechifananidzo chimwe chete uye meseji. Njodzi ndeyekuti kana ikashanda, iwe hauna zano chairo nei uye kana ikakundikana, iwe hauzive chekupa mhosva. Pane kudaro, edza hushoma hwemana epakati emifananidzo / mavhidhiyo, mana mavhezheni ekopi kopi, misoro mitatu uye maviri kufona-kune-zviito (maCTA). Ehe, izvi zvinotora nguva yakareba kuti zvigadziriswe, asi zvinopa rakakosha dhata pane izvo zvinhu zviri kushanda uye nei.
Gadzirira zvese: Yakaenda kare mazuva ekumisikidza-iyo-uye-kukanganwa-iyo yemagariro kushambadzira mishandirapamwe. Paunovhura, iwe unofanirwa kuongorora mashandiro emitambo zuva rega rega kwevhiki yekutanga uye kanokwana kaviri pasvondo mushure meizvozvo.
Bvisa zvisirizvo zvemifananidzo, mameseji kana misoro yenyaya.
Shift bhajeti kumifananidzo, mameseji kana misoro yenyaya iri kunyanyisa kuita.
Kana mushandirapamwe usiri kushanda, dzima, ongorora iyo data uye edza kuigadzirisa pane kurega mabhajeti achibuda ropa.
Kana iwe uchityaira kwakawanda kudzvanya asi hapana ari kushandura pawebhusaiti yako, ongorora iyo yekumisa peji-iro simba uye meseji yeshambadziro inouya kuburikidza? Fomu rako rakareba here? Ita shanduko. Kuedza. Dzorera mushandirapamwe wako kumashure uye uone kana ichigadzirisa nyaya yacho.
Vateereri vakamanikana: Kune mazhinji emishandirapamwe, vateereri vako vanovigwa muboka revateereri (tsono yako mugalactic haystack) uye ibasa rako kuburitsa vanhu vabude. Imwe nzira huru yekuita izvozvo kunatsiridza vateereri vako zvichienderana nekuita.
Kana dzimwe nyika kana nyika dzisiri kupindura, bvisa kubva padziva revateereri.
Kana vamwe huwandu hwevanhu vari kupindura pamitengo yakapetwa kaviri pane yeumwe munhu wese, chinja mabhajeti kuti uvatsigire.
Shandisa vateereri vekuita uye uvake zvinotaridzika. Semuenzaniso, kana iwe uchimhanyisa Facebook mushandirapamwe uchishandisa webhusaiti kudzokorora, gadzira vateereri vateereri vanomiririra vanhu vanoshanda zvakanyanya. Wobva washandisa vateereri ava kuvaka vateereri vakaita sevako uye nekuvandudza mhedzisiro yako zvakanyanya.
Munzvimbo ine rima tinozviwana isu, uye zvishoma ruzivo rwunovhenekera nzira yedu.
Zivo inokosha uye yemagariro enhau Jedi, data ndiyo yechokwadi sosi yekuziva. Rangarira kuti iyo yakawanda data iwe yaunoshandisa paunenge uchimisa ako enhau midhiya, izvo zvirinani uye zvinotarisirwa kuti mhedzisiro yako ichave.
Uye dai iro simba rive newe, nguva dzose.
Tags: Obi Wan Kenobioptimizenyeredzi hondo
Michael ndiye weSocial Media Director pa STIR Kushambadzira & Yakabatanidzwa Kushambadzira. Zvemagariro midhiya zvinopfuura basa kwaari, chishuwo chakatendera Michael kusanganisa kugona kwake, pfungwa dzake dzekuongorora, uye rudo rwake rwekuitira vatengi kuita basa rinogara richinetsa uye risingambofinha.